Dhalinyaro Soomaaliyeed oo Furumaha hore ee dagaalka Ciidamada Xoogga ugu geeyay Raashin Bisil “Sawirro’’ – Radio Muqdisho
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo Furumaha hore ee dagaalka Ciidamada Xoogga ugu geeyay Raashin Bisil “Sawirro’’
Golaha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay ku mideysan yihiin dhalinyarada ku dhaqan degaanada Maamulkaasi, ayaa bilaabay Olole lagu dhiiragalinayo ciidamada Xoogga dalka ee dagaalka kula jira Nabadiidka Al-shabaab.
Dhalinyaradaan Soomaaliyeed, ayaa gaaray deegaanada baarsanguni ,kaban Araare iyo maano muufo halkaasi oo dhawaan laga xoreeyay nabadiidka Al-shabaab, waxayna ciidamada u geeyeen Raashin bisil.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Raashinka u geeyay ciidamada, ayaa ugu mahad celiyay Ciidanka xoogga dalka sida u wadaan howlgalada dalka looga xoreynayo nabadiidka Al-shabaab, waxaana ay tilmaameen in hiil ay la garab taagan yihiin geesiyaasha Qaranka.
Abaandullaha qeybta 43Aad ee Ciidanka xoogga dalka G/dhaxe Cabdi ibraahim, ayaa dhalinyarada Jubbaland uga mahad celiyey dhalinyaradaasi sida ay u garab istaagan yihiin ciidamada qalabka sida iyo sida ay uga qeyb qaadanayaan howlgalada ka dhanka ah Argagixisada Al-shabaab.
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Maamulka Jubbaland ,ayaa howlgalo ka dhan ah nabadiidka Al-shabaab ka wada degaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubbooyinka.
Dhegeyso Barnaamijka Wadajir oo ka hadla xasilinta dalka iyo dowladaha hoose